Sary mivantana an'ny WWDC an'i Apple 2016 | Avy amin'ny mac aho
Natao ho an'ny WWDC 2016: sary mivantana
Ora vitsivitsy alohan'ny hanombohany ny hetsika andrasana indrindra amin'ny taona ho an'ireo mpamorona fampiharana ho an'i Apple -ary ireo mpanaraka ny marika rehetra-, ny WWDC 2016, ny haino aman-jery sy ny solontena izay nanararaotra nanatrika ity fihaonambe manerantany ho an'ny fampandrosoana 2016 mandefa sary ho anay izy ireo ny faritra.
Ny zavatra rehetra dia efa vonona ao amin'ny Bill Graham Civic Auditorium any San Francisco raha mbola mameno ny manodidina azy ireo mpanampy amin'ny 19:00 -Ny fotoana Espaniola- manomboka ny fampidirana voalohany.
Amin'ireto sary manaraka ireto azo tamin'ny alàlan'ny haino aman-jery vahiny blogdoiphone Afaka mandinika isika ny facades ny tranobe mamirapiratra voaravaka marika amina endriny maro loko. Anatiny, ny efitrano avereno ireo famantarana izay mikimpy ny programming language izay hahafantaran'ireo mpanampy manokana azy.
ny hafatra tsara sy mamorona tondra-drano isaky ny zoro, miaraka amin'ny firarian-tsoa «misokatra ny saina", amin'ny"fomba fijery mamelombelona"efa"tontolo tsara kokoa«; ny tontolo manodidina manentana sy misokatra amin'ny fahaiza-mamorona ny mpandray anjara rehetra, mifanaraka tanteraka amin'ny filamatra ao amin'ny orinasa.
Mbola tsy nahatratra ny hevitra izay hasehon'i Apple amin'ity herinandro ity amin'ny WWDC 201? Ao amin'ny Soydemac dia afaka mahita ianao izay rehetra fantatra hatreto Entre tsaho, fanamafisana ary ny tsy fahazoan-kevitra sasantsasany momba ny orinasa izay nanome anay fanazavana misimisy kokoa izay nomanin'i Tim Cook ho antsika amin'ny andro ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Natao ho an'ny WWDC 2016: sary mivantana
Ny Vaovao farany momba ny Apple Campus 2 Advances
Araho ny fehezan-teny WWDC 2016 mivantana avy any Mac avy any Mac aho